Archive du 20181103
Mifampatoky i Dada sy ny vahoaka “1er tour” dia vita no tanjona
Mifampatoky ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana sy ny vahoaka Malagasy fa rehefa lany ho filoham-pirenena izy dia fanamby ny hoe samy higoka ny tandrify azy ny sokajin’olona isan-tokony ka ho afaka amin’izao haizin-kitroka misy azy izao.
Jeneraly Noel Rakotonandrasana Nanakiana ny tetika maloton-dRajoelina
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny minisitry ny foloalindahy tamin’ny andron’ny tetezamita ny Jeneraly Rakotonandrasana Noel manoloana izao toe-draharaham-pirenena izao. Eo anatrehan’ny fanaovana fampielezan-kevitra amin’izao dia misy zavatra toa sarotra tanterahina.
Olan’ny resaka lisitra sy kara-pifidianana Maro ireo mimenomenona
4 andro sisa dia ho tonga ny androm-pifidianana izay ho filoham-pirenena. Vao mainka miharihary sy mampimenomenona ireo olom-pirenena anefa ho an’ireo boriborintany eto Antananarivo fotsiny, ohatra, ny olana mitranga eo amin’ny resaka lisitra sy kara-pifidianana, raha ny fanadihadiana natao.
Tranga tsy azo hanoharana mialoha ny fifidianana Tsy mbola anatiny isika, hoy ny loholona Amido
Misy lalàna mifehy ny fifidianana, hoy ny loholona Amido, ary io no lehibe indrindra isorohana ny zava-mitranga. Be tokoa, hoy ity loholon’Antsiranana ity, ny zava-nitranga tao ho ao.
Andry RAJOELINA Mamo miantso polisy…
Omaly ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) no nanatitra ny taratasy mahakasika ireo fitoriana nataon`ireo kandidà eny amin`ny Fitsarana. Roa no isany dia ny natao tamin`ireo kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina sy faha-25,
Gerard Ramamimampionona “Fifampiresahana no ilaina fa tsy fifanozonana”
Tsy fantatry ny olona, hoy ny mpikambana eo anivon’ny komitin’ny fampihavanana Malagasy sady mpahaifiarahamonina, Gerard Ramamimampionona, ny asan’ny CFM. Ampatsiahiviko hatrany, hoy izy, fa ny Malagasy no natao hampihavanina fa tsy ny mpanao politika fotsiny.
Firenena Alemana Manara-maso akaiky ny fifidianana
Anisan’ireo firenena manohana ara-bola ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara i Alemaina ka nanolotra vola ao anatin`ny kitapom-bolan`ny SACEM izay mitentina 341 000 USD entina hanapiana ity CENI Madagascar ity hikarakarana fifidianana eto Madagasikara.
Fikambanana VOT Niatrika fiofanana ireo mpikambana
Niatrika fiofanana teny Ambatonakanga ireo mpikambana eo anivon’ny Vondron’olon-tsotra eto an-drenivohitra ny Alarobia lasa teo, notarihin’ny filohany Rtoa Sarah Zoe. Anton’ny fiofanana ny mba hananan’ny mpikambana herin-tsaina sy fahasalamana hiatrehana ny fifidianana, indrindra manoloana izao savorovoro sy safotofoto misy eto amin’ny firenena izao.
Niampitan’i Jean ranomasina mihitsy !
Tongasoa ianao Jean ! Tena navelanao hatramin’ny fampisehoana tetsy am-pita mihitsy fa dia tena niampitan’i Jean ranomasina mihitsy ity revy eto tanàna ity aa !
Minisitry ny fitsarana “Tena tsy nety ny nataon’i Fanirisoa Ernaivo”
Hofoanana tanteraka ny fifaninanana farany teo na mikasika ny mpitsara na ny mpiraki-draharaha hidirana ao amin’ny sekoly ENMG, hoy ny minisitry ny fitsarana Harimisa Noro Vololona omaly.
Minisiteran`ny Fitsarana Hanafaingana ny fitsarana ireo voafonja vonjimaika
Mahatratra 24 000 ireo gadra naiditra am-ponja vonjimaika, miandry ny fitsarana azy, manerana ireo fonja 82 misy eto Madagasikara raha ny antontan’isa navoaka farany. Mahakasika ny fitsarana an`ireo voafonja eto Madagasikara dia hisy paik`ady apetraka amin`ny fanatanterahana izany.
Fanaiky Solomiral Tsy ampy 30.000 dôlara ny vola handidiana azy any Inde
Amin’ny volana desambra ho avy izao raha tsy misy ny sampona no hiatrika fandidiana any Inde i Fanaiky ilay mpitendry gitara beso ao amin’ny tarika Solomiral.
NISANDOKA HO JENERALY
Nosamborin’ny zandary tao Ankazobe ny mpisandoka iray ho jeneraly miasa eo anivon’ny prezidansa ary koa ny mpanao gazety iray izay rehefa nohamarinina dia mpisandoka koa.
Fifidianana ho filohan’ny FMF vaovao Hafanafana any Vohemar anio sabotsy
Raha ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana ho filohan’ny Repoblika vaovaon’i Madagasikara no nalaza tato ho ato teto amintsika dia somary
Tetika maloto no hianteherana
Andro sisa isaina, dia tonga ny andro malaza! Andro hoentin’ny Malagasy maneho fa manana ny fahefany izy eto amin’ity tany sy ny fanjakana ity. Misy kandida telopolo mahery ireo, saingy efa hita taratra ihany ny hoe: iza no hamokatra sy hahazo vato?
Taksibe notrongisina kamiao Mpandeha 7 naratra mafy teny Manjaka Ilafy
Nitrangana lozam-pifamoivoizana nahatsiravina teny Manjaka Ilafy, akaikin’ilay orinasa Somacou, omaly tokony ho tamin’ny 3 ora folakandro.
Ankizy sahirana eto an-drenivohitra Ny 27 % ihany no afaka mianatra eny amin’ny EPP
Betsaka ireo ankizy sahirana eto an-drenivohitra sy ny manodidina no tsy afaka manovo fahalalana eny amin’ny sekoly ambaratonga fototra akory noho ny fahasahiranana.
Rafi-pampianarana eto Madagasikara Tokony hovana hifanaraka amin’ny fivoarana, hoy Ratrema William
Mitombo isa hatrany ireo tanora nahavita fianarana eto amintsika saingy tsy mahita asa. Ilana fampiharana paikady hafa mihitsy ny fijerena manokana ireny tanorantsika ireny, hoy Ratrema Willliam, lehiben’ny vondrom-panabeazana Aceem omaly.
Banky foiben’i Madagasikara Notazonina 9,5% ny taha torolalana
Nanapa-kevitra ny hitazona ny taha torolalana (taux directeur :TD) ho 9,5% ny banky foiben’i Madagasikara (BFM) tamin’ny fanambarana nataony omaly zoma 2 novambra.
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana Mila miara-mientana ny mpitandro filaminana, tribonaly, atitany
Eo anatrehan’ny fanaovana fampielezan-kevitra amin’izao dia misy zavatra toa sarotra tanterahina. Inona moa no ilana “drône” ho amin’ny fanenjehana dahalo.
Miha hipoka hatrany ny kitapom-bolan’ny CENI satria omaly dia mbola nahazo famatsiana avy amin’ny governemanta alemanina mitentina 341.000 dolara indray ity rafitra ity.
Kaominina Morarano Gara RN 44 Hiharan’ny didin’ny be sandry ny saribao vokarin’ny mponina
Araka ny fitarainana ataon’ny mponina any an-toerana dia heno izao fa noraofin’ny andian’olona milaza ho mpiasan’ny Fanalamanga miaraka amin’ny vatana zandary vitsivitsy tsy nampiseho taratasy mazava nanomboka tamin’ny alakamisy 1 novambra nitohy omaly zoma 2 novambra 2018 ny saribao novokarin’ny olon-tsotra monina ao Amboarabe fokontanin’i Marofody
Fitantanana ny tanàn-dehibe Hohatsaraina arakaraka ny hetahetan`ny mponina
Efa mihamaro ny mponina eto Iarivo ankehitriny, hany tsy maharaka intsony ny fahamaroan`ny mponina ny fotodrafitrasa hahafahana mandray azy ireo eto amintsika raha ny tatitra nentin`ny minisiteran`ny fanajariana ny tany sy ny fananan-tany omaly.
Ady ara-barotr’i Amerika sy Sina Tokony handraisana lesona
Lasa 20% sisa ny tahan’ny fanondranan’entan’ny firenena Sinoa mankany Amerika noho ny fampakarana ny hetran’ny fadin-tseranana.